Sucuudiga oo cambaareesay dilkii mid kamid ah dublumaasiyiinteeda Pakistan – SBC
Sucuudiga oo cambaareesay dilkii mid kamid ah dublumaasiyiinteeda Pakistan
Riyadh:- xukuumadda Riyadh ayaa cambaareysay dilkii mid kamid ahaa dublumaasiyiinteeda qunsuliyada sucuudiga ku leedahay magaalada Karachi ee dalka Pakistan weerar hubeysan ay geysteen laba nin oo saarnaa mooto dhugdhugley, kuwaasi oo beegsaday gaarigii dublumaasiga meel u dhow qunsuliyada sucuudiga ee Karachi.
Dhanka kale mas’uul katirsan wasaaradda arrimaha dibadda sucuudiga oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa sheegay in xukuumadiisu ay qaadatay qaraar ay ku adkeenayso amaanka muwaadiniinteeda ku sugan dalal ay Pakistan kamid tahay.
Safiirka sucuudiga ee magaalada Islamabad oo la hadlayey Radiosawa ayaa sheegay in ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo sababta loo beegsaday dublumaasi Xasan Musfir Al-qaxdaani.
Safiirka ayaa intaas ku daray in safaarada sucuudigu ay hadda la socoto baaritaanada ay wadaan laamaha amaanka dalka Pakistan islamarkaana ay weydiisteen maamulka Pakistan in ilaalo adag loo sameeyo qunsuliyadda sucuudiga ee Karachi iyo safaaradda Islamabad.
Safiirka ayaa ku gacan seeray in dhacdadani ay kulugu leedahay dilkii hogaamiyihii Al-qaacidda Osama Bin Laden, wuxuuna sheegay in ay haboon tahay in aan laga hor dhicin baaritaanada deg dega ah ay wadaana laamaha amaanka Pakistan.
Dhanka kale afhayeen u hadlay dhaqdhaqaaqa Daalibaan ayaa sheegtay mas’uuliyadda dilka dublumaasiga sucuudiga .
Afhayeenku waxa uu intaas ku daray in ay sii wadayaan fulinta weerarada noocaas oo kale ilaa inta mareykanku ka joojinayo duqeynta ay geesanayaan diyaaradaha aan la wadin ee Mareykanka kuwaasi oo lagu beegsanayo hogaamiyaasha daalibaanka iyo ururka Al-qaacidda.